Weerar Ka Dhacay Deegaanka Ceel-wareegow. – Bogga Calamada.com
Weerar Ka Dhacay Deegaanka Ceel-wareegow.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey saacadihii lasoo dhaafay weerar culus ku qaadeen difaacyada iyo fariisimaha maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay ka sameysteen deegaanka Ceelwareegow oo ka tirsan gobalka Shabeelada Hoose.
Dagaalka waxaa la iksu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka waxaa si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin gobalkaasi ka tirsan.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dagaalka markii muddo uu socday ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin si buuxda ula wareegeen deegaanka walow saacada kadib ciidamada Mujaahidiinta ay dib uga baxeen deegaankaasi.
Dhanka kale ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay tiro madaafiic ah ku garaaceen difaacyada ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo kuwa maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay ka sameysteen degmada Qoryooley ee gobalka Shabeelada hoose.